Xoghaya guud ee hey’adda Qatar Red Crescent oo Booqasho ugu tagay dalka suudaan bukaanada Qaraxii Muqdisho 14 Octoober – |
Xoghaya guud ee hey’adda Qatar Red Crescent oo Booqasho ugu tagay dalka suudaan bukaanada Qaraxii Muqdisho 14 Octoober –
Wafdi uu horkacayo xoghaya guud ee Hey’adda Bisha Cas e Qatar mudane Cali Bin Xasan Al-xamaadi ayaa booqday bukaanada soomaaliyeed ee ku jira isbitaalada dalka Suudan. Booqashada xoghayaha waxaa ku wehlinayay Xoghaya Bisha Cas ee Sudan iyo madaxa xafiiska bisha cas Qatar ee dalka Sudan.
Mr- Alxamaadi ayaa mid mid u dul istaagay bukaanada asaga oo ka wareysatay xaaladooda caafimaad iyo adeega loo fidiyay markii ay yimaadeen dalka suudaan. Bukaanada ayaa ka warbixiyay xaaladooda ayaga oo oga mahadceliyay dowlada Qatar garab istaagooda bukaanada iyo sida ay ula xanuunsatay. Xoghaya ayaa gudoonsiiaya bukaanada hadiyooyin iyo kaalmo uu ugu talagalay bukaanada iyo ehelkooda oo la jooga.
Xoghayaha ayaa u sheegay in dadaalada lagu caawinayo umada soomaaliyeed ay sii wadi doonaan ayada oo la fulinayo amarka amiirka dowlada Qatar, waxa uuna u rajeeyay dhamaan bukaanada caafimaad deg deg ah.